पुरिएका पशुको उद्दार भएन, १६ हजार पशु र ८० हजार पक्षी मरेको अनुमान - Nepal News - Latest News from Nepal
पुरिएका पशुको उद्दार भएन, १६ हजार पशु र ८० हजार पक्षी मरेको अनुमान
२३ बैशाख, काठमाडौं । महाभूकम्पमा ज्यान गुमाएका साढे सात हजारको शव उद्धारकर्मीले निकालिसकेका छन्। तीमध्ये अधिकांश शव आफन्तलाई जिम्मा लगाएर अन्त्येष्टिसमेत भइसक्यो।
महामारी र रोग निम्तिन सक्नेतर्फ ध्यान दिँदै भग्नावशेषमा पुरिएका बाँकीको खोजी तीव्र छ। भूकम्पमा मान्छेसँगै पुरिएका घरपालुवा जनावर तथा पशुपन्छीको उद्धार र व्यवस्थापन भने हुन सकेको छैन।
भग्नावशेषमा पुरिएर कुहिएका जनावर तथा पशुपन्छीको मृत शरीरसमेत महामारी र रोगका लागि मान्छेको शवजत्तिकै हानिकारक हुन्छ। भूकम्पले ग्रामीण भेगमा बढी क्षति गरेका कारण त्यहाँ पालिएका जनावर तथा पशुपन्छी धेरै मरेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयको मंगलबारको तथ्यांकअनुसार देशभर ६ हजार सात सय ४७ ठूला पशु मरेका छन्। ठूला पशुमा गाई, भैंसी, घोडा, गधा पर्छन्। आठ हजार सात सय ३४ साना पशु मरेका छन्।
यसअन्तर्गत सुँगुर, बाख्रा, भेडा, कुकुर आदि पर्छन्। ८० हजार पाँच सय ४१ कुखुरा र परेवा मरेका छन्। मरेका पशुपन्छीमध्ये मंगलबार साँझसम्म एक हजार १८ वटा व्यवस्थापन गरिएका छन्।
बाँकी पशुपन्छीको व्यवस्थापन भएको छैन। ग्रामीण बासिन्दाले बस्तीनजिकका केही गाईबस्तु खाल्डोमा गाडे पनि धेरै पशुपक्षी भग्नावशेषमा पुरिएकै अवस्थामा छन्।
सिनो व्यवस्थापनसमेत वैज्ञानिक नहुँदा संक्रमणको खतरा बढ्ने विज्ञले बताएका छन्। मन्त्रालयले देशभरका पशुसेवा कार्यालयलाई मरेका पशुपन्छी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिए पनि जनशक्ति अभावमा काम अघि बढ्न सकेको छैन।
कतिपय गाउँमा उद्धारका लागि गएका स्वयंसेवकले सिनो हटाउने काम गरिरहेका छन्। मरेका पशुपन्छीको सिनोले भूकम्प प्रभावित धेरै गाउँ गनाउन थालिसकेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्।
कृषि मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव तथा पशु स्वास्थ्य अन्वेषण प्रयोगशालाका पूर्वप्रमुख डा. दामोदर सेढाईंका अनुसार सिनो गहिरो खाल्डोमा पुरेर बाक्लो चुना छर्किनुपर्छ।
चुनाले सिनोमा भएका भाइरस तथा अन्य जीवाणु मार्छ र छिटो माटोमा मिल्छ। ‘सिनो व्यवस्थापन नभए महामारी र रोगको संक्रमणको ठूलो सम्भावना रहन्छ’, डा. सेढाईंले भने।
तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै पशुपन्छी सिन्धुपाल्चोकमा मरेका छन्। पशुसेवा विभागका अधिकृत उपेन्द्र सिंहका अनुसार हालसम्म त्यहाँ दुई हजार पशुपक्षी मरेको तथ्यांक छ।
घाइते पशुपक्षीको संख्या पनि त्यसकै हाराहारी छ। गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा तथा काभ्रेमा पनि धेरै पशुपन्छी मरेका छन्। सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका पाँच हजार दुई सय ११ पशुपन्छीको उपचार गरेको छ।
काठमाडौं आसपासका क्षेत्रमा पशुपन्छीका क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघसंस्थाले उद्धार तथा सिनो व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। एनिमल वेलफेयर नेटवर्क नेपालका अध्यक्ष मनोज गौतमका अनुसार विभिन्न विदेशी उद्धार टोलीको सहयोगमा सिनो व्यवस्थापन तथा घाइतेको उपचार भइरहे पनि पर्याप्त छैन। उद्धार तथा खोजीका क्रममा अझै पनि गाई तथा कुखुरा जिउँदै भेटिएको गौतमले बताए।